Dowladaha Soomaaliya oo Qadar oo heshiis ku kala saxiixday Muqdisho – Radio Muqdisho
Dowladaha Soomaaliya oo Qadar oo heshiis ku kala saxiixday Muqdisho
Kaddib markii maanta uu soo gaaray magaalada Muqdisho Wafddi ka socda Dowladda Qadar ayaa waxaa ay kulamo la yeesheen Wasiirro ka tirsan Dowladda Soomaaliya oo ay la saxiixdeen heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed, iyadoo uu goob joog ka ahaa R/wasaare Xasan Cali Khayrre.
Heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan 200 boqol oo milyen oo dollar ayaa Soomaaliya u saxiixay Wasiirka qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya halka dowladda Qadarna uu u saxiixay madaxa sanduuqa horumarinta ee dalkaasi.
Mudane Jamaal Maxamed Xasan Wasiirka Qorsheynta iyo horumarinta iyo maalgashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo u hadlay Dowladda Soomaaliya ayaa ka mahadceliyay taageeradan ay dowladda Qadar u fidinayso shacabka Soomaaliyeed.
Mashruucani horumarinta ayaa waxaa qeyb ka ah dhismaha Waddooyinka ka baxa Muqdisho ee aada magaalooyinka Afgooye iyo Jowhar ee Gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose.
Waxaa kale oo ay sheegeen in ay qeyb ka qaadan doonaan shaqo abuurka dhallinyarada,sidoo kale dhismayaasha Waddooyinka ayey sheegeen in ay shaqo badan ka heli doonaan Dhallinyarada Soomaaliyeed.
Wafdiga ka socday Dowladda Qadar ayaa balanqaaday in lacagtaasi lagu bixinayo mashruuca horumarinta uu bixindoono Sanduqa Caalamiga ah ee horumarinta Dalka Qadar.
Mas’uuliyiinta Indonesia oo sheegay inay xoog uga saari doonaan dadka daggan goobtii volcanuhu ka qarxay
Wafdigii uu hoggaaminayay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Jabuuti oo maanta ka ambabaxay Muqdisho+Sawirro